Mpaghara Astrakhan na-atụle ohere ịmebe osisi maka mmepụta nke fries French - magazine “Potato System” magazine
Mgbasa Ozi Magazine
Ebe a na-edebe akwụkwọ
Ibe akwukwọ mgbasaozi anyị
Tọzdee, Machị 4, 2021
Injinia / Teknụzụ
Omume / Etu
Achọpụtara ngwaahịa nke Agrofirm "KRiMM" bụ ngwaahịa kachasị mma nke 2020 na mpaghara Tyumen
Association "Soyuzkrakhmal" na-aga n'ihu usoro nkuzi ume
Mpaghara Astrakhan na-atụle ohere ịmebe osisi maka mmepụta nke fries French
Jerusalem atịchok nhazi osisi n'okpuru-ewu na Lipetsk mpaghara
A ga-ewu ụlọ ọrụ canner kachasị na Russia na mpaghara Volgograd
Otu osisi nduku ga-emeghe na mpaghara Tula
Erere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% osisi n'isi obodo enyere ikike nke Lam Weston Belaya Dacha LLC ka emechara
Nwa atụrụ Lambon West Meijer ga - abụ onye isi nke osisi fries French na Lipetsk
"Zolsky nduku". Na-eto eto nduku na nje-free gburugburu ebe obibi
Akụkọ ọma banyere LLC "Razdolye" (mpaghara Moscow)
Dmitrov poteto kwesịrị ịghọ uto nke Russia
Agro Space: ntuziaka agro maka ndị na-akọ ugbo
Osisi Solanuz bụ naanị ụlọ ọrụ na Central Asia, ọkachamara na mmepụta nke ngwaahịa emechaala site na poteto
Pringles: ihe niile malitere na kuki, wee banye n'oche robotic
A na-akọ nduku na ndịda Brazil. Ahụmahụ ọrụ ugbo
Akụkọ banyere ihe ịga nke ọma. LLP "Zhuravlevka-1", Republic nke Kazakhstan
Gwa anyi banyere ulo oru gi. LPH Kuznetsov, Krasnoyarsk Territory
O nweghi nsonaazụ
Lee nsonaazụ niile
в News, Ntughari
Ndị nnọchi anya Mpaghara Astrakhan keere òkè na nzukọ ọrụ na mpaghara Lipetsk n'ókèala nke osisi "Nwa atụrụ Weston - Belaya Dacha". Ndi otu a tụlere olile anya nke mmejuputa oru ngo nke mmekorita nke France.
E gosipụtara ndị Astrakhan kachasị na CIS maka mmepụta nke fries French. Nkà na ụzụ ọgbara ọhụrụ na Lipetsk na-erepịa ihe karịrị 200 tọn akụrụngwa. Osisi nwere ihe ndabere ya. Otu n'ime ndị na-ebunye ngwa ahịa bụ MAPS LLC, nke dị na mpaghara Enotaevsky. Yabụ, imepụta ụlọ a na-ekpuchi mbubata French fries na Russia.
Nzukọ ahụ tụlere ohere ịchọta ụdị ọrụ yiri nke a na mpaghara Astrakhan. Nakwa - mmụba nke ebe n'okpuru nduku na mpaghara a.
isi: Isi A
Tags: Mpaghara AstrakhanFrench fires emepụtara
A na-amanye ndị ọrụ ugbo nọ na United States ịbanye traktọ nanị iji dozie ha
Akwukwo ohuru ohuru nke ndi Chelyabinsk mejuputara di na State Register
Ndị nwere oke akụ nke "Belaya Dacha"
Mpaghara Astrakhan ghọrọ onye ndu nke Southern Federal District na nchịkọta nduku
Ike nke akwụkwọ nri na-akwalite Poland
Ngalaba Họrọ isiNchịkọtaAlaAkụkọ MmeriEkuNdụmọdụ ọkachamaraAkụkọ ụwa Australia Eshia America Afrika Europe OceaniaNewsAkụkọ ụlọ ọrụMpempe akwụkwọMmiriOnye mbuNtughariMpagharaOzi Russia Akụkọ mpagharaIhe omumeOmume / EtuInjinia / TeknụzụỌmụmụThe Economy
kpọọ anyị: +7 (831) 2459507
Magazine Magazine 2021 "Usoro nduku" 12+
Ihe omuma ihe omuma banyere ya na akwukwo nyocha "Potato system"
Ndi Federal Service for Supervision of Communications, Ozi Teknụzụ na Mass Nkwukọrịta edenye aha ahụ
Akwụkwọ PI Nke FS77-35134 nke dị na Jenụwarị 29, 2009
Ntọala ụlọ ọrụ LLC "Agrotrade"
Ndi ana-akpo ochicho ederede: tel.: (831) 245 95 06/07, Ext. 7735 e-mail: ks@agrotradesystem.ru
Onye isi nchịkọta akụkọ O. V. Maksaeva
Uche ederede ederede adabaghị mgbe niile na uche ndị edemede.
Na-ahụ maka ọdịnaya nke mgbasa ozi bụ ndị mgbasa ozi.
Mgbe ị na-edegharị / na-ehota ihe, achọrọ njikọ weebụsaịtị potatosystem.ru.
Banye na profaịlụ
Chezọrọ akaranzuzo gị? ndebanye
Dejupụta ubi maka aha
Ugbo niile aghaghi iju ntinye
Biko tinye aha njirimara gị ma ọ bụ adreesị email gị iji tọgharịa paswọọdụ gị.